१५ प्रतिशतसम्म बढ्यो सार्वजनिक सवारीको भाडा, कुन रुटको कति ? (सूचीसहित) - सिधा मिडिया
१५ प्रतिशतसम्म बढ्यो सार्वजनिक सवारीको भाडा, कुन रुटको कति ? (सूचीसहित)
२० चैत्र २०७८, आईतवार १९:३० मा प्रकाशित
242 जनाले पढ़िसके
सरकारले सार्वजनिक गाडीको भाडा १५ प्रतिशतसम्म बढाएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा चैत १७ को मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार आइतबारदेखि सार्वजनिक सवारीको भाडा लागू हुनेछ ।
अब इन्धनको मूल्य पाँच प्रतिशतभन्दा धेरैले घटबढ भएमा त्याेअनुसार स्वचालित प्रणालीबाट मूल्य समायोजन गर्ने निर्णय पनि भएको छ । असारयता डिजलको मूल्य ३४ प्रतिशत बढेको आधारमा अहिले नयाँ भाडा दर तय भएको विभागले जनाएको छ । विभागले स्वचालित भाडा प्रणाली लागू गर्न १३ वटा सूचकलाई आधार बनाएको छ । ती सूचकमध्ये पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य हिस्सा ३५ प्रतिशत रहन्छ ।